I-Linux 5.10 Iza nokuSebenza Okubalulekile kwe-Ext4, Ukusebenzisana kwe-AMD SEV, nokuningi | Kusuka kuLinux
Ngemuva kwezinyanga ezimbili zentuthuko, ILinus Torvalds iveze ukukhishwa kwenguqulo entsha ye-Linux kernel 5.10, Uhlobo olufika ngesimo segatsha elinesikhathi eside sokusekelwa, izibuyekezo zalo ezizoshicilelwa okungenani iminyaka emibili.
Izinguquko eziphawulekayo zifaka phakathi le nguqulo entsha ifaka ukuhambisana nendlela yokuvikela iMemTag yezinhlelo ze-ARM64, inketho yokufaka "nosymfollow", ukulungiselelwa okuphawulekayo kwe-Ext4, Ukulungiswa kwe-XFS 2038, inqubo entsha ye-process_madvise call, ukusekelwa okuthuthukisiwe kwe-AMD SEV ngokubethela kwerejista ye-CPU, ikhono lokumisa kancane izinhlelo ze-BPF.
Uhlobo olusha ithole ukulungiswa okungu-17470 kusuka konjiniyela be-2062, Usayizi wePatch: 64MB (izinguquko zithinte amafayela ayi-15101, kungezwe imigqa yekhodi engu-891932, kwasuswa imigqa engu-619716). Cishe ama-42% akho konke Izinguquko ezifakwe ku-5.10 zihlobene nezishayeli zedivayisi, cishe u-16% wezinguquko uhlobene nokubuyekeza ikhodi ethile yezakhiwo zehadiwe, i-13% ihlobene nesitaki senethiwekhi, i-3% ihlobene nezinhlelo zamafayela kanti i-3% ihlobene izinhlelo ezingaphansi ze-kernel.
Izici ezintsha eziyinhloko zeLinux 5.10
Kuzinguquko ezinkulu ezenzekayo, singathola ukuthi ku-ext4 imodi yokuqinisekisa esheshayo ingeziwe (fast_commit), okuyi kunciphisa kakhulu ukubambezeleka kokusebenza kwamafayela amaningi ngenxa yokugeleza ngokushesha kwemethadatha kudiski lapho wenza ucingo lwe-fsync (). Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ukusebenzisa i-fsync () kuvumelanisa isethi yemethadatha engafuneki. Kumodi ye-fast_commit, imethadatha kuphela edingekayo ukuthola kabusha uhlelo lwefayela uma kwenzeka ukuphahlazeka idluliselwe kwirejista, isheshisa izingcingo eziya ku-fsync () futhi ithuthukise ukusebenza kwemisebenzi elawula imethadatha.
Ngenkathi ye- Ama-Btrf afaka phakathi ukusebenza okuhle okubalulekile okuhlobene nokusebenza kwe-fsync (). Ukwehliswa kombango we-log mutex kuholele ekunyukeni kokusebenza okungu-4% kanye nokwehliswa kwe-14% kwe-latency lapho kwenziwa ibhentshimakhi yedench namakhasimende angama-32. Ukuqeda ukwenza okwengeziwe kwezixhumanisi nezinguquko zamagama kukhuphule umkhawulokudonsa ngo-6% futhi kunciphise ukubambezeleka ngo-30%. Kukhawulela i-fsync ukulinda kuphela ekubhaleni kabusha ukusebenza okwengeziwe ngo-10-40%.
Futhi, Ukuqaliswa kwe-Btrfs kwe-I / O eqondile (io ngqo) kudluliselwe kohlaka lwe-iomap.
I-XFS ingeza izinguquko zemethadatha ukubhekana nezinkinga zokuchichima kohlobo lwedatha 32-bit time_t ngo-2038. Kungezwe izinguquko ezifanayo, kuhanjiswa ukuchichima kwesibali sikhathi kuya onyakeni wama-2468, kukhodi yokubala izikhathi ze-disk quota. Ifomethi yeXFS V4 yehlisiwe, umsebenzisi uyelulekwa ukuba abuyekeze ifomethi ye-FS ibe yi-V5, kepha kunesikhathi esanele ngaphezu kwesibuyekezo njengoba ukwesekwa kwe-V4 kuzohlala kuze kube ngu-2030. I-XFS nayo isishintshe usayizi wokufaka kwe-inode btree, evumela amasheke amaningi okudilizwa kanye nezikhathi zokukhweza ezisheshayo.
Ukuze uhlelo olusezingeni eliphansi lwe-FUSE lusebenzise ukusekelwa kokusebenza kwe-DAX ukufinyelela ngqo uhlelo lwefayela, ngokudlula kunqolobane yekhasi ngaphandle kwensiza yokukhiya esezingeni lokufaka isicelo esetshenziselwa ukugwema ama-virtiofs we-cache kabili inhlangano yokufinyelela ngokuhlanganyela kuzinhlelo zezivakashi , izinkomba namafayela. IVirtiofs ibuye ingeze ukusekelwa kokufakwa okwehlukanisiwe kokuhlukaniswa ngamaphoyinti ahlukile wokuphakama kusistimu yokubamba.
Uhlelo lwefayela I-F2FS ingeza imodi entsha yokuqoqa udoti I-ATGC (Age Threshold Garbage Collection), ukusekelwa okuthuthukisiwe kwamadivayisi we-NVMe aklanyelwe, kanye nokwehla okusheshayo kwemininingwane ecindezelwe.
Ku-F2FS naku-Ext4, indlela yokusebenza namagama wamafayela yenziwe kabusha ngaphandle kokubheka onhlamvukazi; Kunqunywe ukuthi kuhlanganiswe ukwenziwa kwamagama wamafayela angazweli ngokuhambisa ikhodi ehambisanayo kumtapo wezincwadi ojwayelekile.
Olunye ushintsho olubalulekile kufayela le- i-asynchronous I / O interface io_uring engeza amandla okwenza amasongo avinjelwe lokho kungabiwa ngokuvikelekile nenqubo engathembekile. Lesi sici sivumela uhlelo oluyisisekelo ukukhawulela ngokukhetha ukufinyelela kuphela kuzincazelo zalo wamafayela ngamanye angasetshenziswa ezinhlelweni zenkampani yangaphandle nge-io_uring, kanye nefulegi le-PIDFD_NONBLOCK lengezwe kufayela lesistimu le-pidfd_open () ukudala isichasisi sefayela elingakhiyi (elifana ne-O_NONBLOCK le-pidfd).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Linux 5.10 iza nokwenza kahle okukhulu kwe-Ext4, ukusebenzisana okuthuthukile kwe-AMD SEV, nokuningi